White nkume - The kpakpando ngwaahịa maka ụlọ gị | Bezzia
Nkume na-acha ọcha: Ngwaahịa kpakpando maka ụlọ gị
Ị ma nkume ọcha ahụ? N'ezie, ị nụla ya, n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa maka ụlọ anyị. Ma kwere ya ma ọ bụ na ị kwenyeghị, mgbe ịmara uru ya niile, ị ga-aga maka ya ma ọ bụrụ na i nwebeghị ya. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ eziokwu na anyị na-achọ ngwaahịa kpọmkwem maka elu ọ bụla. Ma, olee maka inwe ihe niile n'otu?
Ọ bụ ihe na Ọ ga-azọpụta anyị ma na mbara igwe n'ụlọ ma na aku na uba ebe. Ya mere, anyị nwere ike ịmalite ịchọpụta uru niile nke nkume ọcha nwere na otu a ga-esi jiri ya nweta uru kachasị na ya. Anyị ga-agwa gị ihe niile ka ị ghara tufuo nkọwa!
1 Kedu ihe a ga-ehichapụ na nkume ọcha
2 Otu esi eji nkume ọcha mee ihe
3 Kedu ihe ejiri mee ngwaahịa nhicha a?
4 Uru dị ukwuu nke nkume
Kedu ihe a ga-ehichapụ na nkume ọcha
N'ebe a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ dị iche: Kedu ihe a na-apụghị iji nkume ọcha sachaa? N'ihi na nke bụ eziokwu bụ na mgbe anyị na-eche banyere ihicha ụlọ anyị, ụdị a eke ngwaahịa nwere ike na-eji na a ka ukwuu n'ime elu. N'ihi ya, a pụrụ iji ya sachaa ma plastik na enameled ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. Ma ọ bụ na mgbakwunye, ọ ga-adị mma maka ọlaọcha, ọla kọpa na ọbụna kristal. Na mgbakwunye, na kichin, anyị nwere ike ihicha ma sink, seramiiki hob na marble ma ọ bụ granite.. Ọ dịkwa mma maka ụlọ ịsa ahụ na ọkpọ mmiri, yana iwepụ nchara nchara. N'ihi ya, atụla egwu iji ya, karịsịa n'ebe ndị a na-ehicha ihe bụ isi nwere ike iguzogide.
Otu esi eji nkume ọcha mee ihe
Ọ bụ ezie na a ga-enwe ọtụtụ nhọrọ, ma ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi na-ebutekarị sponge iji kwado ihicha. Anyị ga-asacha ogbo a wee kpochaa nke ọma. Mgbe ahụ, anyị ga-agafe ya site na nkume ọcha na mgbe ahụ n'elu elu ka a gwọọ ya. Dịka iwu n'ozuzu, ọ gaghị adị mkpa ka ị na-ete oke. Mgbe imechara nke ọma n'elu, wepụ ya na akwa akwa ruo mgbe ọ nweghị izu ike nke ngwaahịa ahụ. Iji nweta ìhè dị mkpa, were akwa dị ọcha na nke akọrọ, ka ịlaghachi n'ebe anyị kpochara. Ị ga-ahụ ka ọ na-egbuke egbuke na-enweghị ime nnukwu mgbalị dị ka anyị kwuru. Ọzọkwa, cheta na ịchọghị ngwaahịa dị ukwuu iji hụ nsonaazụ kacha mma. Naanị na obere ego ị ga-enweta ya. Nke a na-eme ka ọ dị ogologo karịa ka ị chere.
Kedu ihe ejiri mee ngwaahịa nhicha a?
Anyị na-ekwu okwute dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ebube. Ya mere, anyị nwere ike na-eche mgbe niile na n'etiti ya Efrata e nwere ụdị ụfọdụ nke mgwa, ka anyị na-ekwu pụrụ iche, na ọ dịghị ihe ọzọ si eziokwu. N'ihi na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ihe mejupụtara ya, anyị ga-agwa gị nke ahụ n'ime ya ị ga-ahụ ụrọ ọcha yana ncha na mmiri, site na glycerin akwukwo nri na sodium carbonate. Ịchọghị ihe ọzọ ị ga-ahapụ anyị n'ụlọ karịa ka ọ dị ọcha. Ọ bụkwa ihe na-egbu egbu, ya mere nhicha ahụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa ka anyị nwere ike iche n'echiche. Ọ nweghị ụdị ihe na-egbu egbu ọ bụla, yabụ na ọ gaghị akpasu akpụkpọ ahụ iwe.
Uru dị ukwuu nke nkume
N'ụzọ a na-apụghị izere ezere, anyị anọwo na-akpọ ha nke nta nke nta nke nta. Otu n'ime uru kachasị mkpa bụ na anyị nwere ike iji ya hichaa elu ụlọ anyị niile. Ọ naghị akpụcha ma ọ bụ hapụ ntụpọ ma ọ bụrụ na anyị sachaa nke ọma Ma ọ bụkwa na nchapụta ga-apụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anwansi. Ọ na-adịru ogologo oge na ọnụahịa ya dị ala maka uru niile ọ kwadebere maka anyị. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ntụpọ ndị kachasị sie ike, na-ahapụ ụlọ gị ka ọ dị ọcha ogologo oge. Na mgbakwunye, ụfọdụ n'ime ha nwere ísì ụtọ lemon nke ga-ejupụta n'ụlọ gị na mmetụta ahụ dị ọcha. Ị nwara?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nkume na-acha ọcha: Ngwaahịa kpakpando maka ụlọ gị
Kedu ihe bụ surimi na gịnị ka e ji mee ya?
Ndị a bụ usoro enyere na 2022 Golden Globes